Dawada Covid-19 oo Lasoo Jeediyay Ma Nin Buka Boqol U Talisay Baa Mise Rajo Dhab ah ? | Dalka Times - News and Politics
Home SO WARKA Dawada Covid-19 oo Lasoo Jeediyay Ma Nin Buka Boqol U Talisay Baa...
Maalintii Arbacada April 29, 2020 ayaa war ka soo yeeray Aqalka Cad ee Mareynkanka walaac ku dhaliyay saynisyahannada (scientists), taas oo loo qaatay in mar kale maamulka Trump uu abuurayo rajo daaweyn ka hor inta aan xogta natiijada lala wadaagin baarayaasha. Dhowr jeer ayaa Madaxweyne Trump horey u sheegay war aan la hubin sida daawada duumada “hydroxychloroquine” inay daawo u tahay caabuqa covid-19.
Ilaa hadda lama hayo daawooyin la oggol yahay inay daaweyn karaan caabuqa ama tallaallo laysku raacsan yahay inay ka hortagi karaan covid-19, inkastoo cudurka uu dunida ku aafeeyay dad kor u dhaafaya 3 malyan iyo bar, tan iyo markii uu soo ifbaxayna laayay in ka badan 250 kun.
Haseyeeshee, natiijooyin horudhac ah oo daraasaad ay sameeysay “Gilead Sciences Inc” oo ah shirkad Maraykan ah xarunteedana tahay California baristeedu ay maalgeliysay (funded) Dawladda Federalka ah, ayaa u muuqata in ay tahay daawada ugu horreysa ee waxtar u leh cudurka “CoronaVirus.”
Dawadan Remdesivir, oo ku jirta tijaabo cilmi (clinical trial) waa dawo la dagaallanta fayruuska, mana aha dawo cusub balse waxay kusoo baxday dhawr sano ka hor inay wax ka tarto bukaannada qaba cagaarshowga beerka iyo nefsashaxumo, taasoo ah bukaannada Ebola iyo Heptitis (New York Times, 1.5.2020).
Inkastoo dawadu aysan ku guulaysan badi aadanka waxaa culumada Sciennsca iyo takhaatirtaba isku raaceen in dawadan ay rajo u leedahay la dagaallanka fayruska bahda Corona ah (RN virusis). Waxaa haddeer dib loo soo celiyay inay noqon karto dawo wax weyn ka tari karta caabuqan Covid-19, gaar ahaa markii ay dawladda federaaliga bilowday in si cilmiyaysan u maamusho tijaabadeeda.
Ma sahlana soo saarista daawooyinka cusub, haddana shirkadaha dawooyinka (pharmaceutical companies) ayaa ku tartamaya baarista 68 daawo tijaabo ah iyo 77 daawo horey loogu adeegsan jiray cudurro kale si ay u helaan daawo waxtar u leh cudurka safmareynka ah.
Dawada Remdesivir waxaa lagu tijiaabiyay ilaa 1063 bukaan oo wax ka badan 181 isbitaal ee adduunka u jiifa bukaanka Covid-19. Xogta la faafiyay toddobaadkan ayaa sheegaysa inay soo yareysay 31% (boqolkiiba 31) muddada ka soo kabsashada bukaanka cudurka Covid-19. Taasoo muddadii 15ka maalmood ahayd soo gaabisay kana dhigtay 11 maalmood oo qura ah.
Walow daawada aan weli dunida laga ansaxin, haddana mar wax laga weydiiyay Dr. Anthony Fauci oo ah madax Machadka Qaranka ee Xasaasiyada iyo Cudurrada Faafa ee Mareykanka ayuu yiri, “waxay xaqiijisay inay xannibi karto fayraska.”
Warqad uu qoray Guddoomiyaha Gilead Sciences Inc ayuu ku sheegay in ilaa hadda ay shirkadda soo saartay 140 kun qaruurad oo ay ugu deeqeyso isbitaallada. Intaas wuxuu raaciyay inay dardargelinayaan wax soo saarka si hal malyan qaruurad loo helo ilaa December 2020 (APNews 30/04/2020).
Jimcihii May 1, 2020 hay’adda FDA oo Mareykanka u qaabbilsan ansixinta daawooyinka ayaa xaalad degdeg ah awgeed u oggolaatay in isbitaallada ay daawada “Remesivir” sii isticmaalaan si loo caawiyo bukaannada, taas oo kordhineyso tijaabada daawaada inta lagu jiro dhibaatada caabuqa covid-19.
FDA waxay horey u oggolaatay ku tijaabinta dadka uu soo ritay covid-19 daawada duumada loo adeegsado ee “Hydroxychloroquine,” inkastoo aysan jirin caddeyn xaqiijineysa inay si guud waxtar ugu yeelan karto bukaannada (Reuters 29/04/2020).
Remdesivir ayaa 68% (boqolkii siddeed iyo lixdan) bukaannadii Covid-19 ee neefsashadu ku adkeed caawisay. Daawada waxaa ilaa hadda lagu tijaabiyay keliya dadka xanuunkoodu yahay dhexdhexaad amase uu aad u liito oo isbitaalka la dhigay.
Machadka “Institute for Clinical and Economic Review” oo qiimeeya waxtarka daawooyinka si loo oggaado qiimaha ku habboon, ayaa waxtarka Remedesivir ee toban maalmood ku qiyaasay 10 doolar. Balse waxaa dhici karto in qiimuhu kor u dhaafo 4500 doolar guusha tijaabada najaxday awgeed.
Shirkadda CareVac ayaa horey baaritaan cilmiyeed ku gaartay dhowr tallaal, kuwaasoo labadii ugu fiicaneyd la filayo in tijaabooyin caafimaad (clinical trials) ay ku jiraan.
Haddii ay dhacdo inta awoodda iyo hantida badan tallaalka iyo daawada rajada laga qabo ay boobaan, sida ku dhacday tallaalkii qandhadii H1N1 2009 lama ogaan karo goorta daawaada cusub soo gaari doono dalalka saboolka ah oo ay Soomaaliya ka mid tahay.
W/Q Cabdulqadir Cariif
Abdi Malik 58 mins ago
Shirkado tartan ugu jira in ay soo saaraan baabuur cusub oo xiligan baahi weyn loo qabo !!
DEG DEG: Dagaal culus oo hadda ka socda Muqdisho & Rasaas xooggan oo la maqlayo
Ra’iisul wasaaraha Somalia oo madaxa WHO kala hadlay arrimo xasaasi ah
Xayiraad la saarey saxafiyiinta xaadira shirka jaraa’id ee DF kaga warbixiso Corona
Dagaal u dhaxeeya maamulada Galmudug iyo Puntland oo ka socda duleedka magaalada Gaalkacyo.
Shirkado tartan ugu jira in ay soo saaraan baabuur cusub oo...
Dawada Covid-19 oo Lasoo Jeediyay Ma Nin Buka Boqol U Talisay...
DEG DEG: Dagaal culus oo hadda ka socda Muqdisho & Rasaas...